उद्योग मन्त्रालय अर्थको महाशाखा जस्तो भयो: चौधरी
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं वरिष्ठ उद्यमी विनोद चौधरीले देशमा लगानी अभिवृद्धि गर्न लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्नु अनिवार्य रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले लगानी तरल हुने र जहाँ असल वातावरण छ त्यहाँ पुग्ने धारणा राखे ।
“पुँजी पानी जस्तै तरल हुन्छ । जता वातावरण बन्यो त्यतै बग्छ”, सांसद चौधरीले भने, “त्यो वातावरण हामीले नेपालमा बनाउनु परेको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि हामीलाई धेरैभन्दा धेरै लगानीको खाँचो छ ।”
लगानी अभिवृद्धिका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै उनले भैरहवामा स्थापना गरिएको सेजमा लगानीकर्ता किन आकर्षित भइरहेका छैनन् भन्ने बारेमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे । “हामीले सेज, इपिजेड र गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनबीचका भिन्नताहरू थाहा पाउनुपर्छ । सेजका लागि भारत र चिनले अवलम्बन गरेका नीतिहरूबाट सिक्नु राम्रो हुन्छ,” सांसद चौधरीले भने, “यी विषयमा हामीले छलफलमै धेरै समय गुजारिसक्यौं अब व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।”
उद्योग मन्त्रालयलको भूमिका अर्थ मन्त्रालयको विभागको जस्तो रहेको भन्नुहँुदै उनले देशमा औद्योगिक विकासका लागि यस मन्त्रालयको हैसियत माथि उठ्नुपर्ने धारणा पनि राखे । अर्थतन्त्रका लागि व्यापार घाटा चिन्ताजनक विषय रहेको भन्नुहुँदै सांसद चौधरीले निर्यातमा अनुदान दिएर र आयात नियन्त्रण गरेर मात्रै यो समस्याको समाधान नहुने धारणा राखे । “व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादनलाई भारतीय र चिनियाँ उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ,” उनले भने ।
नेपाल आयल निगम जस्ता संस्थानहरूको एकाधिकार कायमै राखेर उपभोक्ताको अधिकार हनन भइरहेको भन्दै सांसद चौधरीले पेट्रोलियम प्रोडक्ट जस्ता वस्तुहरूको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्ने बताए । “यस्तो व्यवस्था मिलाउन हामीले धेरै पटक कानुन बनाउने कोसिस ग¥यौं तर किन सफल भइरहेको छैन ?” सांसद चौधरीले भने, “दुई लिटर पेट्रोलका लागि उपभोक्ताले कहिलेसम्म लाइनमा लाग्ने ? आपूर्तिका साधनमा उपभोक्ताको सहज पँहुच हुनुपर्छ ।”
सांसद चौधरीले इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा ध्यान दिन पनि विशेष ध्यानाकर्षण गराए । “नेपालस्थित राजदूतहरूले आ–आफ्ना देशका निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा तीव्र लबिङ गरिरहेका हुन्छन् । तर, हाम्रा राजदूतावासहरू किन यस्तो लबिङ गर्न सकिरहेका छैनन् ? नेपालका ३९ वटा कूटनीतिक नियोगले महिनामा एउटा वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण बनाउने गरी काम गरे भने राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि हामी गम्भीर हुनु आवश्यक छ,” उनले भने ।
उद्योग मन्त्रालयलाई एक नम्बरको बनाउने नवनियुक्त मन्त्री भट्टको दाबी
स्वदेशी पुँजीको प्रवद्र्धन गर्न महोत्सव